Nairobi:-Waxaan idiin soo gudbinaynaa khudbadii jimce ee maanta ee Masjidka Abubakar Sadiiq ee magaalada Nairobi, khudbada oo uu soo jeediyay Sheekh Dr Aadan Sh Cali wuxuuna kaga hadlay Maraatibta Dii
Golaha dacwada ee albayaan oo Tacsi u diray eheladii Sh Saciid Cali Cismaan (Saciid Qalinle)
Golaha dacwada ee albayaan wuxuu tacsi tiiraanyo leh u dirayaa ehaladii iyo asxaabtii uu ka baxay Sh. Saciid Cali Cusmaan (Saciid qalinle) oo 3-12-2016 salaaddi maqribnimo kadib gaadmo lagu dilay maga
Dagaalo goos goos ah oo u dhexeeya Puntland iyo Daacish ka socda duleedka Qandala.
Boosaaso:-Dagaalo goos goos ah oo u dhexeeyay Ciidamada Difaaca Dowladda Puntland iyo kooxda Daacish ayaa ka dhacay duleedka degmada Qandala ee gobalka Bari. Dagaalka ayaa inta badan wuxuu ka dhacay b
Ha,yada Culumada Soomaaliyeed oo bayaan ka soo saartay dilkii Sh Saciid Qalinle (Akhriso)
Muqdisho:- Hay,ada culumada Soomaaliyeed ayaa maanta bayaan qoraal ah ka soo saartay dilkii naxdinta lahaa ee shalay magaalada Muqdisho loogu geystay Sh. Siciid Cali Cismaan (Saciid Qalinle) alaha u n